Ngwa nlekota & njikwa ndekọ | Motadata
Ijikwa njikwa ndekọ onodu
Nweta data ndekọ gị yana Metrics maka ọhụhụ zuru oke na Scale.
Ihe anyi Ndị ahịa na-ekwu!
BFSI na-eduga abawanyela
2X arụ ọrụ
Akụkọ na-esote: 30% Mmụba na arụmọrụ
Mazị Alex Mijares
Onye ọrụ IT - ICICI Finance Ltd (BFSI)
Motadata Network Monitoring Product Suite. Nkwupụta zuru oke, mgbanwe nhazi na GUI enyi na enyi bụ ole na ole n'ime njirimara nke kachasị amasị Alex.
Mazị Alexa Mijares
Njikwa ndekọ ọnụ ọnụ na Nlebanya zuru oke
Emebere Motadata Log Analytics iji nyere ndị otu dị iche iche aka ịnakọta, nyochaa, nyochaa, na ilele anya data ndekọ maka nyocha ngwa ngwa, nchọpụta nsogbu, na nchịkọta ọkwa dị elu. Ụzọ mkpokọta enweghị mbọ na-ejikọta ndekọ yana metrik na data gụgharia maka nlele etiti yana ọnọdụ dị omimi iji nyochaa mmemme ndekọ.
Nghọta enwere ike ime maka ọrụ, ngwa, sistemu, ngwaọrụ
Ka a na-ebufe akwụkwọ ndekọ, Motadata ozugbo ụyọkọ data ndekọ enwetara n'ime oge yana akọ na-ebuli usoro na ọrụ log.
Chịkọta ma mekọrịta: Na-anakọta ndekọ site na gburugburu ebe dị iche iche site na iji usoro nchịkọta nke dabere ma ọ bụ nke na-enweghị onye nnọchite anya. Jikọọ ndekọ na metrik gị site na email, Slack na ọwa ndị ọzọ.
Otu-Kwụsị Ngwọta: Otu onye ọrụ siri ike nke na-anakọta ụdị data ma ọ bụ usoro ọ bụla site na isi mmalite ọ bụla. Ihe ngwọta otu nkwụsị iji wụnye, hazie na ọnụ ọgụgụ.
Nhazi nke achọrọ: Nọgide na nnabata na njide log, nyocha ma ọ bụ iwu maka amụma mkpesa ndekọ ndekọ dabere na ihe nzukọ gị chọrọ.
Ndị nwere ọgụgụ isi
Nyocha ndekọ dabere na AI
Mee ka mmụta igwe na nyocha dị elu kwalite nyocha na nchọpụta nsogbu gị. Nyochaa ma jikwaa data ndekọ gị site na iji ngwọta njikwa Log nke dị mfe ibugharị yana enweghị mgbalị iji jikwaa.
Nhazi Centralized: Nchịkọta ụkpụrụ ndekọ aha maka nghọta ngwa ngwa gafee nde ihe omume log. Chekwaa ma jikọọ data ndekọ ndekọ gị n'ime ebe etiti ka ịchọpụta ihe adịghị mma wee zaghachi ha ngwa ngwa.
Mbelata MTTR: Jiri nchịkọta ndekọ iji mee ka ọhụhụ gị na-arụ ọrụ maka ngwa na ọrụ gị niile. Wetulata MTTR site na iji ngwa nyocha ihe karịrị 100 na-anọghị igbe, nke otu gbakọtara ndekọ iji chọọ n'ime sekọnd.
Nchịkọta Di elu: Nyochaa, nyochaa, chọpụta ihe gbasara ngwakọ na gburugburu igwe ojii site na iji usoro ejikọtara ọnụ - nweta nyocha dị elu n'oge dị adị site na mmụta igwe.
Ndụ ọdụ na ịdọ aka ná ntị
Wepụ ntụpọ kpuru na nkwado zuru oke maka narị otu narị log isi mmalite gụnyere n'ime ụlọ ruo igwe ojii na ihe niile dị n'etiti. Wepụta obere oge na nhazi yana ọtụtụ oge na nghọta.
Nleba anya nke ọma: Jiri nchọpụta anomaly chọpụta omume adịghị mma na-akpaghị aka. Nweta ọkwa ọkwa ị chọrọ ka amara ya ma nata ha via email, Slack na ọwa ndị ọzọ.
Ndụ Ndekọ ọdụ: Tinye ọdụ dị ndụ n'ọrụ iji hụ ndekọ ndekọ ndepụta nri dị ndụ sitere n'ọtụtụ ebe. Jiri amamihe nyochaa ma chịkọta mmemme ndekọ n'ofe ngwa, ngwaọrụ, sistemụ.
Motadata AI-Powered NMS
Ngwọta zuru oke
Maka nlekota oru arụmọrụ netwọk akpaaka
Jiri sistemu njikwa netwọkụ ndị na-ere ahịa wee nyochaa ntakịrị akụrụngwa IT gị niile.
Na-enyocha & na-ebuli akụrụngwa IT niile.
Na-enyocha netwọkụ na-ahụ na oge kacha elu.
Na-enye dashboards na wijetị nwere ike ịhazi ya.
Na-enye nghọta ọgụgụ isi na-arụ ọrụ.
Nyochaa atụmatụ niile
Njikọ Enweghị Ndozi Site na ọkacha mmasị gị
Teknụzụ Desktọ ọrụ
inyocha Nchịkọta ndekọ
Nchịkọta Ndebanye aha nke Motadata kwadoro na-echekwa oge na ego ụlọ ọrụ gị site na iji nlezianya nyochaa ndekọ na ịchọpụta nhụta dị ike na-arụ ọrụ site na nchịkọta.
Gbalịa AIOPs maka ụbọchị 30
Debe oghere na kalenda anyị wee hụ AIOPs ndụ.
Ngwọta otu nkwụsị gị maka akụrụngwa IT niile
Ọrụ NMS jikọtara ọnụ nke Motadata na-enye azịza AI na-akwalite nke ukwuu maka Nkwenye Ọrụ, Orchestration & Automation, na-enyere ụlọ ọrụ aka iru ebumnuche njikwa netwọkụ ha. Motadata ga-enyekwa gị nlele netwọkụ site na iji ngwa zuru oke yana echiche akụrụngwa, ka ị nwee ike ịchọta ma dozie okwu ngwa ngwa.
Site na TEAM
Mụta ka ndị otu dị iche iche nwere ike isi tinye usoro ikpo okwu anyị aka iji kwalite nrụpụta ha na ịhazi usoro ime ha.
Onye nchịkwa netwọk
Site na USECASEs
Mụta maka nsogbu ndị AIOps na ikpo okwu ServiceOps nwere ike idozi yana uru ha nwere ike inye.
Nlebanya CENTER DATA
Ijikwa tiketi ya
IT SERVICE DESK AUTOTATION
Nchọpụta uru ọ bara
Ihe ịga nke ọma anyị akụkọ
Hụ ka ụlọ ọrụ dị ka nke gị si eji Platform anyị maka nghọta na-arụ ọrụ
Lelee akụkọ niile
A na-enyocha ihe karịrị metric 50 kwa ngwaọrụ
RADWIN, Israel ahọpụtara Motadata dị ka Onye Mmekọ OEM maka ngwa ngwaahịa NMS agbakwunyere maka ndị na-ebu-g…
A na-enyocha ma jikwaa ihe karịrị 1200+ akụ
Motadata nyeere Emirates Healthcare aka ịhazi ọrụ IT na Smart Automation, iji jikwaa ...
A na-ahazi data ndekọ karịa 27 GB kwa ụbọchị
Bharti Airtel, Otu ụlọ ọrụ mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ ahọpụtara Motadata maka ọmarịcha ọrụ ya…
Ị nwere ajụjụ ọ bụla? Biko jụọ ebe a, anyị dị njikere inyere gị aka
Gịnị bụ Log Analytics?
Ngwọta nyocha Log na-anakọta data ndekọ site na mmemme na arụmọrụ dị iche iche. Ndekọ bụ ndekọ nke mmemme, dị ka omume onye ọrụ ma ọ bụ njehie sistemụ, n'ezie-oge. Ha na-enyere gị aka ịchọpụta ihe egwu nchekwa nwere ike ime site n'inye ozi gbasara ihe ndị ọrụ na-eme mgbe ịnweta akụrụngwa mmetụta.
Kedu ihe ejiri Log Analytics mee ihe?
Enwere ike iji nchịkọta ndekọ aha chọpụta patterns na omume onye ọrụors, nsogbu njirimara, ọrụ nche nyocha, ma ọ bụ irube isi n'iwu ndị etinyere. Oorganizations nwekwara ike iji ya strriegize na hazie mgbanwe akụrụngwa IT.
Kedu ka esi eme nchịkọta ndekọ aha?
Enwere ike ịme nyocha ndekọ site na omume ndị enyere n'okpuru n'usoro oge.
Centralize na Index
Chọọ na nyocha
Nyochaa na njikere